ဆောင်းတွင်းမှာအသားအရည်ခြောက်သွေ့ပျက်စီးတာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းး၆ခု – Trend.com.mm
People & Planet
Posted on October 24, 2017 by Noel
ဆောင်းတွင်းဘက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အသားအရည်တွေကပိုပြီးခြောက်သွေ့ပျက်စီးလာ တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းတွင်းမှာလည်း လှပစိုပြည်တဲ့အသားအရည်မျိုးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
အပြင်ထွက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာရေချိုးသန့်စင်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် Moisture လိမ်းဖို့မမေ့ပါနဲ။့ ဆောင်းတွင်းမှာ အသားအရည်ကပိုပြီးခြောက်သွေ့တာကြောင့်ခြောက်သွေ့တာ ကိုကာကွယ်ဖို့Moisture လိမ်းပေးရပါမယ်။
ဆပ်ပြာတွေမှာအယ်လ်ကိုဟောပါဝင်တာကြောင့် လက်ဆေးတဲ့အခါ၊မျက်နှာသစ်တဲ့အခါမှာ လျင်မြန်စွာခြောက်သွေ့စေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အယ်လ်ကိုဟောမပါတဲ့ဆပ်ပြာ၊မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာတွေကိုသုံးပါ။သုံးပြီးရင်လည်း အစိုဓာတ်ပါတဲ့ကရင်မ်၊ဂျယ်လ်လိမ်းထားပါ။
ဆောင်းတွင်းဘက်ဆို ရေတွေကလည်းအေးနေတာကြောင့်အလုပ်ကပြန်လာပြီးရင် မချိုးချင်ကြတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပဲ ရေနွေးလေးတည်ပြီးစပ်ချိုးပါ။ရေနွေးနွေးနဲ့ရေချိုးတာက ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာပြေပျောက်စေသလို အသားအရည်ခြောက်သွေ့တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ရေကိုအရမ်းအပူကြီးမလုပ်ထားပဲခပ်နွေးနွေးသာထားပါ။အရမ်းပူတဲ့ရေနွေးက အသားအရည်ကိုခြောက်သွေ့စေပါတယ်။
အိုမီဂါသရီးဖက်တီးအက်စစ်ပါဝင်တဲ့ငါးတွေ၊အစေ့အဆန်တွေက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အသားအရည်ကိုနူးညံ့စိုပြည်စေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်းတွင်းမှာ ငါးများများစားပေးပါ။
ပျားရည်ကသင့်ရဲ့အသားအရည်ကိုစိုပြည်စေတဲ့အတွက်တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ပုံမှန်ပေါင်းတင်ပေးပါ။အသားအရည်ကိုပိုပြီးချောမွေ့စေပြီး ခြောက်သွေ့တာကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပျားရည်အစစ်ကသင့်အတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။
Trend Myanmar Team မှ စီစဉ်တင်ဆက်သော trend.com.mm တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သတင်းများ၊ သတင်းဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများကို မည်သည့် facebook စာမျက်နှာ ၊ website များတွင်မဆို ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်မပြုပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
Posted in Beauty, Lifestyle
ဖေ့ဘွတ်ခ်ကို အကျိုးရှိရှိဘယ်လိုသုံးကြမလဲ ?
ရောဂါမျိုးစုံတွန်းလှန်ရေး မန်ကျည်းသီးကို စားသုံးပေး
ကြက်ဥ၊ ထောပတ်သီးနဲ့ သဘာဝဆံပင်အုံထူနည်း
သင့်ရဲ့ဆံပင်မှာ ဗောက်ထခြင်း ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် သိထားရမယ့် အရာများ - SonSon LinLin on သင့်ရဲ့ဆံပင်မှာ ဗောက်ထခြင်း ကင်းဝေးစေဖို့အတွက် သိထားရမယ့် အရာများ
Bernard Collazo on အနီရောင်ငှက်ပျောသီးကပေးသောကျန်းမာခြင်းသုခ
Lisa on Blackpink အဖွဲ့ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး lisa အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်…
Pyaephyoaung on ယောင်္ကျားလေးတိုင်း မပေါ့သင့်တဲ့ ရောဂါအရိပ် လက္ခဏာများ (အပိုင်း -၁)
SansanMu San Mu on သင့် android ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဒီနည်းဖြင့် ရှာကြည့်ပါ
August 2020 (108)
July 2020 (143)
June 2020 (150)
May 2020 (131)
April 2020 (112)
March 2020 (83)
January 2020 (82)
December 2019 (48)
November 2019 (97)
October 2019 (99)
September 2019 (142)
July 2019 (141)
May 2019 (168)
April 2019 (137)
March 2019 (159)
January 2019 (160)
December 2018 (151)
November 2018 (160)
October 2018 (160)
August 2018 (164)
July 2018 (168)
June 2018 (204)
April 2018 (165)
March 2018 (171)
February 2018 (175)
January 2018 (203)
December 2017 (184)
November 2017 (76)
October 2017 (72)
August 2017 (107)
July 2017 (85)
June 2017 (183)
April 2017 (169)
March 2017 (220)
February 2017 (216)
January 2017 (228)
December 2016 (224)
November 2016 (203)
October 2016 (232)
September 2016 (238)
August 2016 (222)
July 2016 (218)
June 2016 (236)
May 2016 (234)
April 2016 (186)
March 2016 (232)
February 2016 (243)
January 2016 (209)
December 2015 (259)
November 2015 (213)
October 2015 (229)
September 2015 (222)
August 2015 (208)
July 2015 (280)
June 2015 (269)
May 2015 (244)
April 2015 (255)
March 2015 (292)
February 2015 (265)
January 2015 (278)
December 2014 (319)
November 2014 (253)
October 2014 (282)
August 2014 (309)
July 2014 (337)
June 2014 (261)
May 2014 (312)
April 2014 (299)
March 2014 (350)
February 2014 (395)
January 2014 (576)
December 2013 (515)
November 2013 (416)
October 2013 (256)
Theme: Simplus Blog by 8therate.com.
Copyright - Tend Myanmar